မေ ၃၁ | HoLOLo....DiLoLO
အအေးဓါတ်တစ်စက်ကလေးမှ ရှိမနေတဲ့ နေ့လည်ခင်း။
မနက်အိပ်ရာနိုးကတည်းက မရပ်မနား ထပ်ခါတလဲလဲ ဆိုပြနေရှာတဲ့ ကိုမျိုးကျော့မြိုင်။
မိုးတွေလည်း ရွာမနေသလို၊ စိတ်တွေလည်း လေမနေပါ။
ဒီနေ့မလုပ်ရင်မရဘူးဆိုတဲ့အလုပ်မရှိဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာကတစ်ကြောင်း၊ တစ်ညလုံး ကြွက်တက်ထားတဲ့ ခြေသလုံးရဲ့ ကြွက်သားနာကျင်မှုကြောင့်တစ်ကြောင်း၊ ဘာမှကို မလုပ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကို အဓိကအကြောင်းထားပြီး၊ မွန်းလွဲလာသည်အထိ မရွေ့မလျား ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်။
သီချင်းထပြောင်းဖို့၊ တခုခုထစားဖို့၊ အဲဒါတွေထက် ငြိမ်ငြိမ်လေးသာ နေချင်နေသေးသည်။ အတွေးတွေကသာ………. ကမ္ဘာတစ်ဘက်ဆီသို့………. ယေဘုယျအားဖြင့် အိပ်မောကျနေမည့် သူတစ်ယောက်ဆီ…..။
ဂစ်တာကိုင်လိုက်ပြီး ဘာသီချင်းဆိုပြရမလဲ မေးလိုက်တိုင်း အဝေးကြီးပဲ.. တစ်ပုဒ်ကိုပဲ ဆိုခိုင်းတတ်တဲ့သူ။ နေ့နဲ့ည ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့အရပ်နှစ်ခုမှာ ကိုယ်နဲ့သူ။ ခုများတော့တကယ်ကို အဝေးကြီးပဲ။ ကိုယ့်အကြောင်းပြောလိုက်တိုင်း နာမည်ကြားရင်တောင် အာရုံနောက်တယ်ဆိုတဲ့ တဆင့်စကားများ။ အလိုက်မသိ Friend Requestတွေ အကြိမ်ကြိမ်ပို့မိလို့။ ကိုယ့်နာမည်လည်း မကြားချင်၊ သူ့သတင်းတွေလည်း ပြောမပြကြပါနဲ့ဆိုတဲ့ လေထဲကအသံများ။ ဒေါသထွက် စိတ်ရှုပ်တိုင်း နီမြန်းလာတတ်တဲ့ မျက်နှာကို မြင်ယောင်ရင်း Cancelပြန်လုပ်ပြီးတာရဲ့နောက်၊ ကိုယ့်မျက်စိရော နားကိုပါ ပိတ်ထားလိုက်တော့တာ.. တစ်နှစ်၊ နှစ်နှစ်၊ သုံးနှစ်။
ခင်ဗျားဖြစ်ချင်တာ သိပ်များလွန်းမနေဘူးလား။ ကျွန်တော်နဲ့သွားရင် ခင်ဗျားခရီးမတွင်ဘူး ထင်နေတယ်မဟုတ်လား။ ခုချိန်လာမေးရင်လည်း ထိုထိုမေးခွန်းများတွေအတွက် အဖြေမရှိသေးပါ။ မိန်းမ၀ါဒီပါဗျာ.. နင်နဲ့ငါ မသုံးစမ်းပါနဲ့ဗျာ.. စသဖြင့် ညည်းတွားရင်း ပုခုံးပေါ် ခေါင်းလာမှီတဲ့အချိန်ကို အချစ်ဆုံးဆိုတာ ပြောမယ် ပြောမယ်နဲ့ မပြောဖြစ်လိုက်ခဲ့ဘူး။ ဘယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုများ ကျွန်တော်နဲ့ တိုင်ပင်ဖူးလို့လဲ ဆိုတိုင်း ကိုယ်ပြုံးဖြစ်ခဲ့တယ်။ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေဆီက ငါတို့လည်း နင့်ကို နားမလည်ဘူး ဆိုတဲ့လှိုင်းတွေ ရောက်လာတုန်းကလည်း ကိုယ်ပြုံးနေခဲ့တယ်။ ကိုယ်က ဘုရင်မဖြစ်နေပြီး၊ သူလိုချင်တာက ပန်းတပွင့်ဖြစ်တယ် ဆိုပြီး ကဗျာဆရာ သူငယ်ချင်းက သုံးသပ်ပြန်တယ်။ ကိုယ်ပြုံးရုံသာ။ သတိမရဘူး သီချင်းတပုဒ်ကို အကျယ်ကြီး ဖွင့်ဖွင့်ထားတတ်တဲ့အကြောင်း စာအိတ်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ လက်စွပ်လေးနဲ့အတူ ရောက်လာတုန်းကလည်း ကိုယ်ပြုံးနေဖြစ်ခဲ့တယ်။
တစ်ယောက်တည်း လျှောက်ရတဲ့လမ်းတွေမှာ နေသားကျမှုနဲ့အတူ ကျေနပ်ခြင်းပါထပ်ပေါင်းလို့။ နောက်ပြန်လှည့်ဖို့ အိပ်မက်ထဲတောင်ထည့်မမက်မိသေးပါ။ ဘယ်ဘက်လက်သူကြွယ်ကို မြင်ပြီး၊ ဇဝေဇ၀ါအကြည့်ခံရတိုင်း၊ မျက်နှာကို ခပ်မော့မော့ထားပစ်လိုက်ဖို့သာ အကျင့်လုပ်ထားဖြစ်တယ်။ လွန်လေသော နှစ်တွေကအတိုင်း ရှိနေဆဲ ဘယ်ဘက်ရင်ဘတ်အောက်က စည်းချက်တွေကိုလည်း အလို.. ဘာမှကိုကြားရတော့ပါလားလို့ မှတ်ဥာဏ်ကို သတင်းပို့ အယုံသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီ။ သူပြောနေကျ.. သိပ်မာတဲ့ခေါင်းနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာ တောက်ပချင်တဲ့ ကြယ်..။ တသက်လုံးသာ ကိုယ့်အစွမ်းနဲ့ကိုယ် တောက်ပဖို့ စိတ်ကူးနဲ့.. တကယ်ကို ကိုယ်မလွမ်းတတ်ပါ။
May 31, 2014 by hololodilolo	story
One thought on “မေ ၃၁”
nang nyi says:
ဒါဖတ်ပြီး သီချင်းတစ်ခု ခေါင်းထဲရောက်လာတယ်..
keep bleeding ~~ keep keep bleeding love.. ဆိုတာ